आर्थिक | A News Portal of Special News In Depth Form Kathmandu Nepal…डिजिटल जमानाको इ-पत्रिका !
Posted By: Chhaya Chandraon: February 24, 2017In: आर्थिकNo Comments काठमाण्डौ । एनआइसी एशिया बैंकले आफ्ना सेवाग्राहीहरुलाई तनाव दिन थालेको छ । ओभर ड्राफ्ट शिर्षकबाट मनलागी जग्गामा लगानी गरेका कारण चरम संकटमा परेको एनआइसी एशिया बैंकले आप्mनो गल्ती ढ...	Read more Share
Posted By: Chhaya Chandraon: February 23, 2017In: आर्थिक, मुख्य समाचारNo Comments काठमाडौं, १२ फागुन । पछिल्लो समय जनता बैंक अप्ठारोमा परेको छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार लम्सालले लफडा गरेपछि सो बैंक अप्ठारोमा परेको हो । उच्च स्रोतका अनुसार सीइओ लम्सा...	Read more Share
Posted By: Birendra Rajon: February 22, 2017In: आर्थिक, मुख्य समाचारNo Comments काठमाडौं, ११ फागुन । भारतले ९०० मेगावाटको अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि सतलज कम्पनीलाई अनुमति दिएको छ । साथै ९१ अर्बको बजेट पनि स्वीकृत गरेको छ । भारतीय प्रधानमन्त्री...	Read more Share
Posted By: Chhaya Chandraon: February 21, 2017In: आर्थिकNo Comments काठमाडौं, १० फागुुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालुु आर्थिक बर्षको पुुस मसान्तसम्ममा ८८ वटा बैंक तथा फाईनान्स कम्पनीहरुको ईजाजत खारेज गरेको छ । राष्ट्र बैंकले झण्डै चार बर्ष अघि वित्ती...	Read more Share
अल्ट्रा प्रिमियम ओपिसि सिमेन्ट नयाँ आवरणमा
Posted By: Chhaya Chandraon: February 21, 2017In: आर्थिकNo Comments काठमाडौं। जगदम्बा सिमेन्टको अल्ट्रा प्रिमियम ओपिसि सिमेन्ट नयाँ आवरणमा बजारमा आएको छ । १५ वर्ष पुरानो ब्राण्ड जगदम्बाको अल्ट्रा प्रिमियम ओपिसिको लोगो, प्याकेजिङ, ट्रेडमार्क र विज्ञ...	Read more Share
Posted By: Udhav Tamangon: February 20, 2017In: आर्थिकNo Comments काठमाडौं, ९ फागुन । साताको दोस्रो कारोवार दिन आज सोमबार नेप्सेमा सामान्य गिरावट देखिए पनि कारोवारमा रकममा भने उच्च बृद्धि देखिएको छ । नेप्से आज चार दमसलव २४ अंकले घटेर १३ सय ६५ दसम...	Read more Share
एनसीसी बैंक काण्ड : अधिकांस व्यवस्थापन प्रमुख घोटालामा संलग्न !
Posted By: Udhav Tamangon: February 20, 2017In: आर्थिकNo Comments न्यूज अप्रेशन अर्थ व्यूरो, काठमाण्डौ, ९ फागुन । केही समयअघि मात्र चार वटा बिकास बैंकहरुलाई गाभेर एकीकृत कारोवार सुरु गरेको नेपाल क्रेडिट एण्ड कर्मस बैंकको अवस्था निकै नै दयनीय देखि...	Read more Share
Posted By: Udhav Tamangon: February 19, 2017In: आर्थिकNo Comments काठमाडौं, ८ फागुुन । साताको पलिलो कारोवार दिन आज आईतबार नै नेप्सेमा उत्साह थपिएको छ । सुरुवाती दिनमा नै नेप्से सुचक तथा कारोवार रकम दुुबै बढेको छ । आज नेप्से २५ दसमलव पाँच अंकले बढ...	Read more Share
लौ पढ्नुस: ‘विग मार्ट’ को ठगी धन्दा !
Posted By: Birendra Rajon: February 17, 2017In: आर्थिक, मधेश-बिशेष, मुख्य समाचारNo Comments काठमाडौं, ६ माघ । काठमाडौं बसुन्धराका सुमन श्रेष्ठले विग मार्टबाट किनेको ब्राउन सुगर घर लगेर पखाल्दा पूरै सेतो भएछ । प्रति किलो २२० रुपैयाँमा किनेर लगेको ब्राउन चिनीमा शंका लागेर उ...	Read more Share